Izilwane ezihuquzelayo ezindizayo ezake zabusa isibhakabhaka eNyakatho Melika, zembula izidumbu ezintsha - BGR - Thumela RELAY
Accueil » ISAYENSI Izilwanyane ezindizayo ezake zabusa isibhakabhaka eNyakatho Melika, zembula izindulu ezintsha - BGR
Uma ubuyela emuva esikhathini lapho amadinosaurs azulazula uMhlaba, uzoba nezinto eziningi zokusaba. Ama-dinosaurs abusa emhlabeni ngokuvamile ayemakhulu kanti ulwandle lwalulawulwa izidalwa ezinamandla ngokulinganayo. Isibhakabhaka saba nesabelo saso sezilwane ezihehayo, futhi amafosili asanda kutholwa asiza ukumaka leli phuzu ngokumangazayo.
Ucwaningo olusha olushicilelwe ku Ijenali ye-Vertebrate Paleontology kuchaza indawo eyayikade inomoya. ezihuquzelayo zikhulu kangangokuba zingaqhudelana nezinye izindiza ezincane namuhla. Izinhlobo, okuthiwa Cryodrakan boreas kusho ukuthi "Frozen Dragon of the North", ukukunikeza nje uhlobo lohlobo lwesidalwa esikhuluma ngalo.
Ukuthola ukuba khona kwalesisidalwa esisha kwenzeka kwenzeka ngesithambo esithile esatholakala e-Alberta, eCanada, esifundeni esaziwa kakhulu ngabazingeli bezinsalela zomhlaba. Ososayensi kaningi basebenza ngamathambo ambalwa nje ukudweba isidalwa esikhudlwana, kepha umcebo wethambo oshiywe yilesi sibalo esithile usize iqembu labacwaningi ukudweba isithombe esicace bha esikalini lezi zilwanyane ezingasifinyelela. flying.
"Lolu hlobo lwe-pterosaur (azhdarchids) aluvamile futhi imodeli iningi likhona nje amathambo," kusho uMichael Habib, umbhali-ndawonye walolu cwaningo, esitatimendeni . "Izinhlobo zethu ezintsha zimelelwa yithambo lamathambo. Lokhu kusitshela okuningi mayelana nokuvela kwala mabhukwana amakhulu, ukundiza kwabo nendlela yabo yokuphila. "
Njengoba ucwaningo luchaza, izinhlobo ezintsha zingokweqembu lezilwane ezaziwa ngosayizi wazo omangalisayo. Ezinye zalezi zidalwa zazingaba nesisindo esingamakhilogremu e-500 futhi zisebele amaphiko azo cishe ngamamitha angamashumi amathathu, okuhambelana nesigaba esifanayo nendiza yesimanje yesibani.
Lezi zidalwa ngabe ziveza amathunzi amangalisa kukho konke abazingela ukutholakala kwalezi zilwane kusiza abacwaningi ukuthi baqonde kangcono ukubanjwa kwezilwane kanye nemikhawulo engaba khona.
Umsakazo we-teleskopu omkhulu ovela eChina usanda kuzwakala isiginali engajwayelekile emkhathini - BGR